R I-Rappel Tarot: Izibonelelo kunye nee-CONS zeClairvoyance yayo | 2019
URappel ngumfundi wezengqondo kunye nowe tarot one ofisi yemfonomfono, egxile kwi Astrology, Horoscope, ukubala ngamanani nokunye okuninzi, uyakufumanisa ikamva kunye nesiphelo esikulindeleyo enkosi kumboni we-rappel.
1 Ngubani uRappel?
2 Rappel Uthando iTarot: Izimvo
URappel yimboni yaseSpain eyazalelwa eMadrid (Agasti 20, 1945), waziwa kwi el mundo kamabonwakude ngokuba yenye yezona zinto zilungileyo kwilizwe liphela.
uwabize ligama lesigaba se URafael Paya Pinilla, Elinye lamajelo adumileyo aseSpain. Wakhulela kusapho olukumgangatho ophakathi, kunye nabazali abathengisa ngefashoni kunye nootatomkhulu noomakhulu. Wakhula kunye nabantakwabo bobabini, yena engumzalwana ophakathi.
Wafunda kwiDyunivesithi yaseSorbonne eParis, apho wafumana khona isihloko sokuba ngumfundisi-ntsapho waseFrance, nangona engazange awenze lo msebenzi. Ukuqala kwakhe kobuchwephesha kubekwe kwihlabathi lefashoni njengomyili, umsebenzi awenzileyo iminyaka engama-20.
El imboni Rappel Kwiminyaka eli-10 wayesebenza njengoMlawuli wezoBudlelwane baBantu kwigumbi leqela laseFlorida Park eMadrid.
Ukubonakala kwakhe kumajelo eendaba bekuhlala kuhleli kumaphephancwadi nakunomathotholo nakumabonwakude ukusukela kwiminyaka yama-70s. Enkosi ngomtsalane wakhe nomsebenzi olungileyo wobungcali, uye wanandipha udumo olubi kwaye waziwa njenge imboni yodumo kuba iphakathi kwezi apho inenani elikhulu labacebisi abathembekileyo kunye nabahlobo.
Amaqela rhoqo kunye neTV, Rappel, isixhobo esidumileyo kunye naye Rappel tarot akashiyi nabani na ongakhathaliyo. Uthatha inxaxheba kuqikelelo nokuba ubungozi kangakanani, kwaye ubugcisa bezithethe ezinje ngaye akukho mntu inguye oyingcali yokwenene enolwazi olunzulu malunga nezithethe zaseSpain nezamazwe aphesheya.
Rappel Uthando iTarot: Izimvo
La Ukufundwa kwakhona kweTarot kubaluleke kakhuluUkuqala, uyakucela ukuba unganqamli izandla zakho okanye imilenze nangaliphi na ixesha. Ikwaxhomekeke kakhulu kumandla kamama womhlaba kunye nezibane.
Xa usenza i umnxeba oya kuRappel Ukubona indlela awajika ngayo amakhadi, uhlala ekucela ukuba umazise xa kufuneka eyekile ukushukuma kumgangatho. Ukutolika kwakhe uhlala esebenzisa iArcana.
Ukusuka apho, ukhetha amakhadi ama-4, kwaye kulapho aqikelela khona ngekamva, ngakumbi uphumelele kuThando.
El IKhabhinethi yeRappel yenye yezona zibalaseleyo kwilizwe lonke ezikhoyo, ngomnxeba olula ungabutshintsha ubomi bakho kunye neqabane lakho, abahlobo, usapho, nkqu nomsebenzi.
Amava anokuba nomvuzo xa uthetha emnxebeni noRappel, njengoko enothando olukhulu lokuhamba kunye netarot. Uthatha umsebenzi wakhe ngokungathandabuzekiyo njengomboni olungileyo ophakathi kunye noqeqeshiweyo.